खुवाउने चारो नभएर ३ हजार कुखुरा खोरमै मरे’पछि कुखुरा मालिक रुँदा’रुँदै बेहोस’ (भिडियोसहित)
April 7, 2020 1166
नेपाल लडाउनको मा’र आम जनमान’समा परेको छ त्यसमा पनि कृषकहरु त झनै त्यसको मा,रमा रहेका छन । वैजनाथ गाउँपालिका वडानम्बर २ पहाडीपुर बाँकेका कृषक दिपक गुरूङ यति बेला बे-होश छन ।
लक्ष्यदिप पशुपा’लन फर्म दर्ता गरी कुखुरा पालेका दिपक लकडाउन बढे संगै चिन्तामा छन उनले ५००० हजार लेस कुखुरा जस्ले अन्डा दिन्छ ति कुखुरा केही दिन यता दाना नपायर धमाधम म-री रहेका छन ।
उनिले अहिले आफ्नो कुखु’रा लाई दाना खुवाउन सकेका छैनन् । कुखुरा को दाना दिने साहुले पनि उधारो दाना दिएको छैन दिनमा १० बोरा दाना चाहिने ठाउमा जम्मा एक बोरा दाना पनि खुवा’उन सकिरहेका छैन ।
उनिले रु,दै भने मैले २ करोड लगानी’मा यो पेशा अंगाले तर प्रति फल नपाएर नै मेरा सबै कुखुरा म-रे राज्यले कुनै प्रकारको सहयोग गरेको छैन अब म किस्ता कसरी तिरौ ? उनि रुदै बे-होस भय ।
हुन पनि हो तिहा भएका ५ हजार कुखुरा मा ३५ सय कुखुरा भो,कले म-री सकेका थिए । पहिले महिनाको ९ पेटी सम्म अन्डा दिने कुखुरा हरु त्यसरी मर्न थाले पछि कोपो बि-होस हुदैन ।
उनिले रु:दै भने अब म किस्ता कसरी तिरौ बैकले अब घर लिलामी गर्दै छ अब उठिबास लाग्ने भयो । उनिको खोरमा अहिले १००० कुखुरा हरु छन त्यो पनि म-र्ने क्रममा छन ५ हजार कुखुरा राखेको खोरमा अहिले सबै कुखुरा म-रेर तेती बचेको छ त्यो पनि चा’रो नपाए म-र्ने छन ।
लकडाउन भय संगै पसले’ले यति बेला उधारो पनि नदिने अडर गरेको चल्ला हरु पनि बिक्री नहुने भय पछि उनि झनै मर्का’मा परेका छन । उचित तालिम’को अभाब ले उनिले पशु बिमा गरेका रैनछ’न राज्य लाई धेरै पटक अनुदान को कुरा गर्दा पनि टेरपुच्छर लगाएन छ ।
उनिले आफ्नै लगा’निमा करिब २ करोड ५० लाख लगानिमा गाउमै कहि गर्छु भनि काठ’मान्डौमा घर बनाएर ब्य:बसाय गर्दै आयका दिपकले काठमान्डौ को घर बन्धक’मा राखेर बाँकेमा आयर कुखुरा फ’र्ममा लगानि गरे लगानि गरेको एक बर्ष बित्न नपाउदै उनको अहिले हरि बिझोक अ’बस्था मा पुगेको छ ।
कृषीमा समुनत देश कृषी प्रदान देशमा कृषकको हबिगतमा राज्यको नजर भने पुगेको छैन् । दिपकले नत राज्यबाट केही पाउछु भन्ने आसा नै गरेका छन ।
उनिले धेरै पटक अनु’दान को लागि पहल गरे पनि कतै बाट उनिले साथ भने पाउन सकेका थिएन’न यति सम्म कि अनुदा’न मिलाई दिन्छु त्यसका लागि प्र’पोजल तयार पार्छु भनि उनि बाट १ लाख भन्दा बढि रकम समेत लगियो तर परिणा’म भने केही आएन ।
उनिले भने यो कृषी पेशामा जता’ततै नेताहरु भ्र,ष्टहरु को मात्र जालो रहेको छ यहा केहि नगर्ने ठुला ठुला सह’कारी हरुलाई अनुदान दिईन्छ हामी जस्तो कृषकलाई अनुदानको नाममा केही दिईदैन दिपक ले भने ।
आखीरीमा कृ’षक हरुको पेशा लाई सम्मा’न गर्न नसक्ने सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल को नारा’लाई कसरी पुरा गर्न सक्ला ? आम सर्वसाधारण अहिले यो प्रश्न गर्न बाध्य छन् । बाँकि तलको भिडि’योमा हेर्नुहोला
Prevभगवानको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
Nextकोरोनासँग जुधिरहेको मातृभूमि नेपाललाई कोरियामा रहेका नेपालीको यति ठूलो सहयोग
रमेश प्रसाईको आमा भन्छिन्,: ‘छिमेकीलेनै वि’ष खुवाएर छोरा मारि’देउ भन्थे’ (भिडियो सहित)
अलपत्रमा परेकाहरूलाई काठमाडौंबाट उदयपुर लाँदै गरेको बस बर्दिबासमा दु’र्घटना
दुबै हात छैनन् तर हात हुने`हरु भन्दा बढि काम गर्छिन् ,यस्तो`सम्म गर्न सक्छिन् (भिडियो हेरौं)